Shiinaha Dhalo Kaabsal PET warshad madow iyo soosaarayaasha | Baakadaha Qianduo
Kiniiniga wareega ee balaastigga ah faahfaahinta naqshadda dhalada PET: Adagnaanta, adkaanta iyo foorarsiga iska caabinta dhalooyinka balaastigga ah ee PET waxaa lagu horumarin karaa iyadoo la beddelo qaabka dusha sare ee dhalooyinka caaga ah ee PET, sida jirka dhalada oo aad u dhumuc yar isla markaana kordhinaysa jeexjeexayaasha ama feeraha ku wareegsan dusha dhalada. Xogaha jeexjeexyada dhaadheer ama adkaanta ayaa baabiin kara dheelitirka, hoos u dhaca ama cilladaha ee dhalooyinka PET oo ku hoos jira culeys muddo dheer ah.
Falanqaynta faahfaahsan ee naqshadeynta dhalada PET: Naqshadeynta afka dhalada caaggu waa inay diirada saartaa sida looga dhigo afka dhalada caaggu inuu sifiican ugufiicnaado daboolka iyo shaabadaha Qaybta hoose ee dhalada balaastigga ah waa qeybta daciifka ah ee farsamada shaqada dhalada caaga ah ee PET. Sidaa darteed, salka dhalada balaastigga ah guud ahaan waxaa loogu talagalay inay isku xirnaato; geeska dhalada balaastigga ah iyo qeybta isugusocodka waxaa lagu sameeyaa qaanso weyn. Si loo fududeeyo isu-geynta dhalooyinka balaastigga ah loona kordhiyo isku-xirnaanta dhalooyinka caagga ah, jeexjeexyada gudaha waa in loogu talagalay dhinaca hoose ee dhalooyinka caagga ah. Xagga geeska dhalada balaastigga ee leyliga, waxay u baahan tahay inay taageerto inta badan culeyska dhalada balaastigga ah. Sidaa darteed, kordhinta dhumucda darbiga qaybta waxay ku habboon tahay sii xoojinta adkaanta iyo adkeysiga culeyska dhalada caagga ah. Sidaa darteed, si loo hubiyo adkaanta iyo adkaanta dhalada caaga ah ee PET, marka lagu daro xulashada qalabka leh adkaanta iyo adkaanta, qaabka dhalada caaga ah ee PET waa in loo qaabeeyaa, si kor loogu qaado qallafsanaanta, adayga iyo culeyska culeyska dhalada caaga ah.
Hore: Dhalada qurxinta loo yaqaan 'acrylic makeup'; Dhalada kareemka
Xiga: Kaabsal PET Blue